मःम बेचेर मासिक डेढलाख सम्म आम्दानी « Farakkon
मःम बेचेर मासिक डेढलाख सम्म आम्दानी
प्रकाशित मिति : २०७६ पुष २४ गते बिहिवार
तुलसीपुर, पुस २४ । दाङ तुलसीपुरका २२ बर्षीय दिपक काफ्लेले मःमको खाजा घर सञ्चालन गरेको लगभग ३ महिना पुग्यो । बैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा कतार बाट फर्केपछि उनले यो खाजा घर सञ्चालन गरेका छन् ।
हरेक मानिसको जीवन संघर्षले भरिएको हुन्छ । काफ्लेले पनि ब्याचलर पढ्दा पढ्दै बाध्यताले विदेश जानुपर्ने अवस्था आयो ।उनले काठमान्डौँमा गरेको व्यापार विग्रियो । झन्डै ९ लाखजति रकम डुब्यो । उनलाई विदेश जान रहर थिएन । तर साहुले सताउन थाले । लागेको ऋण तिर्ने पैंशा कमाउन उनी विदेश गए ।
कतारमा झण्डै १४ महिना बसे । त्यहाँ उनले एक बिजनेस कम्पनीमा लेखापालको काम पाएका थिए रे रु कामपनि सजिलै र तलब पनि राम्रै । तर काफ्लेको मन त्यहाँ रम्न सकेन ।
विदेश जहाँ उनले घरमा कसैलाई नसोधी गएका थिए । व्यापारको सिलसिलामा केही समय मात्रै जान लागेको भनेर ढाँटे । मनमा भने लागेको ऋण तिर्ने पैंशा उठाएर फर्किने भन्ने थियो ।
विदेशमा पंैसा कमाएता पनि आत्मसम्मान उनले पाएनन् । त्यसैले स्वदेश मै केही गर्ने निष्कर्षमा पुगे । हाल काफ्लेले तुलसीपुर– सुर्खेत सडक खण्ड अन्र्तगत पातुखोलाको पुलचोकमा ‘राजा मःम’ खाजा घर सञ्चालन गरेका छन । अनलाइन,फोनबाट पनि अर्डरहरु लिन्छन् । होमडेलिभरी सेवापनि दिएका छन् । उनले यो व्यवसाय थालेयता मासिक एकदेखि डेढ लाख सम्म आम्दानी गर्दै आएको बताए ।
उनले यो खाजा घर पार्टनरसीपमा चलिरहेको छ । प्रसान्त चापागाई पार्टनर छन् । आफ्नै ठाउँमा मेहनतले सानोतिनो ब्यवसाय गरेको देख्दा उनीहरुका घरपरिवारपनि खुसी छन् । परिवारवाट पनि राम्रो साथ सहयोग मिलेको चापागाईले बताए । ‘जागिर पाइदैन भनेर विदेश भाग्ने हैन, आफै उद्यमी बन्न सकिन्छ,’ काफ्लेले भने ।
उद्यमीलाई अनुदान बाँड्दै लघुवित्त
खाद्यान्नले दाङमा दश हजार क्विन्टल धान खरिद गर्दै
सोमबार सुनको भाउ कति छ ?
दशैं तिहारका लागि खसी बोकोको नयाँ खरिद मूल्य निर्धारण
आज पनि सुनको मूल्यमा भारी गिरावट
कृष्ण बुढाथोकिको ‘जादु’ सार्बजनिक (भिडियो)
सल्यानका वडाध्यक्ष रावत अपहरणमा परेको शंका
राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको दोस्रो वार्षिक उत्सव
कोभिड-१९ रोकथामका लागी दाङमा १५ करोड बढी बजेट खर्च
५ नम्बर प्रदेशभरि एउटै मापदण्डको चेकिङ बेरिकेट
तुना छिनेपछि देखियो…
मैले कोरोना देखिन…
अपाङ्गता सम्बन्धी तथ्याङ्कः किन हुन्छ सँधैको रडाको ?
— बा —
कोरोना त्रासका कारण त्रीशिदेश्वरी मन्दिरमा धार्मिक कार्य बन्द